ဟိုတယ်ပရိဘောဂတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အခါဘယ်လိုပြproblemsနာတွေတွေ့ရမလဲ – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
ဟိုတယ်ပရိဘောဂသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟိုတယ်သန့်ရှင်းရေးကိုအသုံးပြုသင့်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောဟိုတယ်ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်ဟိုတယ်ရှိပရိဘောဂများသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်. သို့သော်, သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါအချို့လိုအပ်ချက်များနေဆဲအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်. Let's takealook at the misunderstandings that should be avoided when using hotel cleaners to clean the contemporary corner sofa.
1. ပရိဘောဂများကိုသုတ်ရန်ကြမ်းသောအထည်သို့မဟုတ်အဝတ်ဟောင်းကိုမသုံးပါနှင့်. ပရိဘောဂများကိုလက်သုတ်ပုဝါနှင့်သုတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံး, ဝါဂွမ်းအထည်, ဝါဂွမ်းထည်သို့မဟုတ် flannel အထည်, နှင့်အခြားစုပ်အထည်. ကြမ်းထည်, ချည်မျှင်အထည်, သို့မဟုတ်ချုပ်နှင့်အတူဟောင်းအဝတ်, ခလုတ်များ, စသည်တို့. ပရိဘောဂ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခြစ်ရာများကိုဖြစ်နိုင်သမျှများများရှောင်ရှားသင့်သည်.
2. ပရိဘောဂ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်များကိုခြောက်သွေ့သောအ ၀ တ်ဖြင့်မသုတ်ပါနှင့်. ဖုန်သည်ဖိုင်ဘာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, သဲ, နှင့် silica. လူအများစုတို့သည်ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်ကိုခြောက်သွေ့သောအထည်ဖြင့်သုတ်လိမ်းရာတွင်အသုံးပြုကြသည်. ဤအမှုန်လေးများသည်ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်သည်. ဤအခြစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်း, နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိမှမမြင်ရတဲ့, တစ်ည, ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်မှိန်နှင့်ကြမ်းတမ်းပါလိမ့်မည်, နောက်တဖန်အလင်းသည်မလင်းနိုင်.
3. ဆပ်ပြာရေကိုမသုံးပါနှင့်, ဆပ်ပြာ, သို့မဟုတ်ပရိဘောဂများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရေ. ရေထင်းသို့စိမ်လျှင်, ၎င်းသည်သစ်သားကိုပုံသဏ္orာန်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တစ်ပိုင်းတစ်စပုံပျက်သောဖြစ်စေသည်, ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုစေ. သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ, သငျသညျစနစ်တကျသုတ်ရန်သန့်ရှင်းသောရေကိုသုံးနိုင်သည်, သို့သော်သစ်သားထဲသို့အစိုဓာတ်ကိုမ ၀ င်စေရန်စိုစွတ်သောအဝတ်ကိုပရိဘောဂ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမထားပါနှင့်.
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် PLS ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. We are not onlyaဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ butahotel furniture designer
အမှတ်အသားများ (Tags): hotel furniture